पशुपतिनाथको आम्दानी यता पनि ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
पशुपतिनाथको आम्दानी यता पनि !
त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्ग उपयोग गरेबापत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पशुपतिनाथलाई तिर्दै आएको भाडा रकम बढाउनुपर्ने माग गरे पनि एकैपटक भाडा बढाउन नसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
विगतमा सामान्य कुतबालीका रूपमा थोरै रकम तिर्दै आएको प्राधिकरणले केही वर्षअघिसम्म वार्षिक २२ लाख रूपियाँ तिर्न थालेको थियो भने अहिले एक करोड ३५ लाख रूपियाँ भाडा तिर्न थालेको छ । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ ।
बढाएको भाडाको रकम पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई भर्खरै हस्तान्तरण गरिएको छ तर कोषले त्यति रकमले नपुग्ने भन्दै वार्षिक १० करोड रूपियाँ माग गरेको छ ।
विमानस्थलले पशुपतिनाथको एक हजार १६७ रोपनी जग्गा उपयोग गर्दै आएको छ । यसमा आन्तरिक र बाह्य उडानका हवाइ जहाजका लागि धावन मार्ग र हवाइ जहाज विश्राम गराउने ह्याङ्गरको रूपमा उपयोग गर्दै आएको जग्गा धेरै छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा। गोविन्द टण्डनले भन्नुभयो, “धावन मार्ग, हयाङ्गर, यात्रु आगमन तथा प्रस्थान स्थल, टिकट जाँच काउन्टरका लागि प्राधिकरणले जग्गा उपयोग गरे बापतको भाडा कोषलाई प्राप्त भएको छ तर यो रकम निकै कम छ । हामीले वार्षिक १० करोड रूपियाँ माग गरेका छौँ । ”
प्राधिकरणले भने पहिले तिर्दै आएका रकममा बढोत्तरी गरिए पनि एकैपटक ठूलो रकम तिर्न नसकिने जनाएको छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले भन्नुभयो, ‘पहिले तिर्दै आएको रकममा धेरै बढाएर दिएका छौँ । एकैपटक १० करोड रूपियाँ तिर्न सक्ने अवस्था छैन । समयअनुसार रकम बढाउँदै जान्छौँ । ’
यो जग्गा उपयोग गरेबापत कोषले चलन चल्तीको मूल्य अनुसारको भन्दै वार्षिक १० करोड रूपियाँ भाडा मागिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले दैनिक व्यापक आम्दानी गरिरहेको प्राधिकरणले यति धेरै जग्गाको यति थोरै रकम पशुपतिनाथलाई प्राप्त हुनु मनासिब छैन भनेर पत्राचार गरेको बताउनुभयो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कानुन अधिकृत कमलबहादुर बोगटीका अनुसार अथक प्रयासपछि भाडा रकम वृद्धि गरिएको थियो । माग दाबी अनुसारको भाडा तिरेमा लाई अन्याय नहुने उहाँले बताउनुभयो । पशुपतिनाथको नामको कुनै पनि आयस्ता पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा दाखिला हुने नियम छ ।